Famous ekiri fim na Europe na-aghọwo akụkụ dị mkpa nke European omenala. Famous ekiri fim na Europe na-ekwe nkwa na ị na pụrụ iche arụmọrụ. Ọ ga-ahapụ gị kpaliri, kpaliri, na spellbound! Ọdịdị nke n'ịrụ nkà bụ apụ n'anya ngwa ngwa na creativity zuru spectacularly. Ndị a mgbukepụ nke mgbukepụ na-na na na anyị na-echeta. Famous ekiri fim na Europe ike a echiche nke exclusivity na ụkọ. Ọ bụ a nwa oge na nkekọrịta oge, na ị ga-achọ bask na ìhè nke ya na-egbukepụ egbukepụ.
Kasị nke oké-ọbù-abù nke gara aga, n'elu ikpeazụ narị afọ abụọ, mere ebe a. Ọtụtụ ama usoro ihe nkiri nwere mbụ ha mmepụta ebe a dị ka Othello, Nabucco site Verdi, na Madame Butterfly nke Giacomo Puccini.
Paradis Latin bụ oge a na-abịa cabaret nke ahụ bụ nọchiri nke mbụ Latin aterlọ ihe nkiri. The Latin Ụlọ ihe nkiri a họpụtara na mbụ site onye ọzọ karịa Napoleon Bonaparte na 1800s.
The Volkstheater na Vienna bụ a mara mma n'anya ka le. Ọ mbụ mepere 1889. Ọ bụ otu n'ime ụdị ndị kachasị ukwuu n'ụwa niile na mba ndị na-asụ German ma bụrụ ihe a ga-ahụ.
Ị chọrọ Embed anyị blog post “5 Famous ekiri fim Na Europe” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffamous-theatres-europe%2F%3Flang%3Dig የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)